Android – မြန်မာယူနီကုဒ်ဧရိယာ
Wiki Category: Android
Viber messages (Android) မှာ Zawgyi to Unicode auto converted ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့… အရင်ဆုံး viber app နောက်ဆုံးဗားရှင်း ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ (Playstore မှာ upgrade လုပ်ပါ) ပြီးရင် viber setting မှာ အောက်ကပုံထဲကလို ပြုပြင်ပေးပြီးရင် ဖုန်းကို reboot (ဖုန်းပါဝါပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်တစ်ကြိမ်) ပြုလုပ်ပြီးတာနဲ့ ဘာလာလာ ဒေါင်းပါကြောင်း…. Click here to Download
Vivo ဖုန်းတွေ Language English စာထဲရင် ယူနီကုဒ်စာမမှန်တာကို လက်ကွက်အမှန်ရအောင် လုပ်ယူနည်း
Vivo ဖုန်းတွေ Settinh Language မှာ မြန်မာစာမလိုချင်ဘူး ။ အင်္ဂလိပ်စာပဲ ယူချင်တယ် ။ အင်္ဂလိပ်စာယူတော့လဲ ယူနီကုဒ်က စာက လက်ကွက်တွေ မှားနေတယ်။ အဲဒါတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ zFont နဲ့ BaganKeyboard လိုအပ်ပါတယ်။ အောက်က ပုံ ကို တဆင့်ခြင်း လုပ်ဆောင်ပေးပါ။ လုံးဝလက်ကွက်အမှန် စာအမှန် ထွက်လာပါလေ့မယ် ။ ပုဂံကီးဘုတ်က ဗားရှအသစ်ဖြစ်ဖို့လိုပါလေ့မယ် ။ Bagan Keyboard >>http://bit.ly/2kMjAnY အသုံးပြုနည်း >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2351023354946126&id=1272295726152233 zFont >> http://bit.ly/30lVBQc Credit: ခွား_နည်းပညာ
Changing to Unicode on Android based Devices
Devices List အောက်ပါ စမတ် ဖုန်းများတွင် ယူနီ ပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်း ယူဇာ များမှ သတင်းပေးပို့ထားပါသည်။ သင့်ဖုန်းအမျိုးအစားအား ထိုစာရင်း တွင် မတွေ့ခဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်ကြောင်းတွေ့ရှိပါလျှင် ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့် ၎င်း၊ မြန်မာယူနီကုဒ်ဧရိယာဖေ့စ်ဘွခ်စာမျက်နှာတွင် ပို့စ်ရေး၍၎င်း ကူညီပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
Google’s Android 10 ( code named Q ) switched from Unicode compliant “NotoSansMyanmar” font to “Hybrid Font” which is said to be 100% Unicode and 85% Zawgyi. You can download it from us.
MUA Add-on for Web Browsers
Web Browser ‌တွေနဲ့ ယူနီကုဒ် ‌ရော ‌ဇော်ဂျီရော ဖတ်ချင်ရင်တော့ ‌အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ပါ။ Mac OSX Safari အတွက် Mac App Store မှာ download လုပ်ပြီး အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။ Click Here To Download Contributors Thant Thet Microsoft Edge အတွက် Microsoft Edge Extension store မှာ download လုပ်ပြီး အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။ Click Here To Download Contributors ဝင်းလွင်မိုး Firefox အတွက် Firefox Add-Ons မှာ download လုပ်ပြီး အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။ Click Read More …
Pyidaungsu MM လက်ကွက် စာရိုက်နည်းကို ဒီလင့်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မရွှန်းမီ ရေးပေးထားတဲ့ မြန်မာယူနီကုဒ် စာရိုက်နည်း pdf ကို One Drive မှာ ပြန်တင်ပေးထားတာပါ။ Download pdf
Xiaomi ဖုန်းတွင် Unicode အသုံးပြုခြင်း
Xiaomi ဖုန်း အသုံးပြုသူများအတွက် မိမိလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ဇော်ဂျီဖောင့်ကနေ ယူနီကုဒ်စနစ် စံမြန်မာစာကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုလိုသူများအတွက် Default ဖောင့်ကို ပြန်လည်ပြောင်းလဲပုံကို ပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးပါ။ တကယ်တန်းတော့ MIUI မှာက ယူနီကုဒ်စနစ်က ပါဝင်ပြီးသားပါ။ အဲ့ဒီယူနီကုဒ်စနစ်ထဲမှာလည်း မြန်မာဘာသာအတွက် တစ်ပါတည်းပါပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဇော်ဂျီဖောင့် အသုံးပြုနေကြတဲ့သူများ ယူနီကုဒ်စနစ်ထဲမှာ ပါပြီးသား စံမြန်မာစာကို ပြန်လည်အသုံးပြုလိုကြတယ်ဆိုရင် ဖုန်းရဲ့ Home screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ Theme ထဲဝင်ပြီး ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်လေးက လူပုံလေး (My account) ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ပေါ်လာတဲ့စာမျက်နှာထဲက Font ထဲကို ဝင်ပါ။ ထိပ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Default ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် ပေါ်လာတဲ့စာမျက်နှာထဲက အောက်နားလေးမှာရှိတဲ့ Apply ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။ Reboot Read More …
Android OS ၏ Firefox browser တွင် MUA Web Unicode Converter Addon ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်း
ကျွန်တော် အခုပြောပြပေးမှာကတော့ Android OS ပေါ်မှာ Firefox browser သွင်းပြီး ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ရေးသားထားတဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေကို မှန်ကန်တဲ့မြန်မာစာနဲ့ ဘယ်လိုဖတ်ရှုရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းဖြစ်တဲ့ ယူနီကုဒ်စနစ်သုံး မြန်မာစာက ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာအောင် အရိုးစွဲနေပြီဖြစ်တဲ့ စံနှုန်းမမီတဲ့ဇော်ဂျီဖောင့်ကိုသာ လူအများစုက အသုံးပြုနေကြတာဖြစ်လို့ သတင်းဌာနတွေနဲ့ နည်းပညာဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာ ဇော်ဂျီဖောင့်ကိုသာ၊အသုံးပြုပြီး ရေးသားထားကြတာ များပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လိုလည်း ဖေ့စ်ဘုတ်လိုလူမှုကွန်ယက်တွေမှာ သတင်းဌာနတွေကပေးထားတဲ့ လင့်ခ်တွေထဲဝင်ကြည့်လိုက်ရင် ဖုန်းထဲမှာပါဝင်ပြီးသား ယူနီကုဒ်စနစ်သုံးဖောင့်နဲ့တွေ့တော့ စာတွေက မမှန်ကြတော့တာပါ။ အဲဒီပြဿနာကို အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းလို့လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာလည်း ဖုန်းမှာ Root access ရှိဖို့ မလိုသလို ထူးထူးခြားခြားလည်း လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ လုပ်ရတာလည်း လွယ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး Firefox browser Read More …